पर्यावरणीय संरक्षण भन्नाले के बुझिन्छ ?
पर्यावरणलाई जस्ताको तस्तै अर्थात त्यसको प्रकृतिक स्वरुपमा नै जोगाइराख्ने कार्यलाई नै पर्यावरण संरक्षण भनिन्छ । पर्यावरण बिनास वा असन्तुलनको अवस्था आउन नदिनु नै पर्यावरण संरक्षण हो । प्रकृतिले सबै प्राणी बनस्पतीका लागि आवश्यक साधन स्रोत दिएको छ तर त्यो सिमित छ । जसले जसरी पायो खर्च वा नोक्सान गर्ने गरी त्यो प्राप्त छैन । त्यसैले प्रकृति प्रदत्त साधन स्रोतको सन्तुलन बिग्रन नदिनु नै पर्यावरण संरक्षण हो ।
1 म्याग्नाकार्टा भन्नाले के बुझिन्छ ?
2 हेलो पैसा भनेको के हो ?
5 Career News and Info असार ५, २०७४
6 कृषि गणना २०६८ अनुसार को हो त कृषक ?
9 Career News and Info वैशाख २०,२०७५
10 स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम संचालित जिल्लाहरु